မြကျွန်းသာမိုးကုတ်ရိပ်သာ | Mya Kyun Thar isanewly founded Meditation Centre headed by Venerable Dr. Ashin Parami. It is situated in the Yadanarkyun Ward, Thunandar Road, North Okkala, Yangon, Myanmar. It follows the technique of Mogoke Sayadaw Phayargyi, an eminent meditation master in 1960s. | Page 40
ကိုယ့်ခန္ဓာဟာ ကိုယ့်သံသရာပါပဲတဲ့။ ကိုယ့်သံသရာကို နောက်ပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့လဲ အနေထပ်သလောက် အသေတွေ ထပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာကလွဲလို့ ဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဘာလို့ အနေ အသေတွေ ဒီလောက်ထပ်နေရပါလိမ့်မလဲဆိုရင် မသိမှု အ၀ိဇ္ဇာ ခေါင်းဆောင်နေလို့ပါပဲ။ ဒီလိုသာ မသိမှုအ၀ိဇ္ဇာ ရှေ့တန်းတင်ပြီး ဘ၀ခရီးတွေ ဆက်နေကြဦးမယ်ဆိုရင် အနေ အသေတွေထပ်၊ အတောမသတ်နိုင်တဲ့ ခန္ဓာသံသရာ တွေနဲ့ပဲ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေရတော့မယ်ဆိုတာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကုသိုလ်ပြုပြီး လူဖြစ်ရပါလို၏၊ နတ်ဖြစ်ရပါလို၏၊ ဗြဟ္မာဖြစ်ရပါလို၏လုို့ဆုတောင်းမယ်ဆိုရင် အသေထပ်ဖို့နဲ့ အထပ်ထပ်သေဖို့ ဆုတောင်းတာပဲဆိုတာသဘောကျ။ အသေဟာ `မရဏမ္ပိ ဒုက္ခသစ္စံ´- ဒုက္ခသစ္စာပါပဲ။ အသေထပ်ပြီး ဒုက္ခမရောက်ချင်တော့ပါဘူးဆိုရင်တော့ ဒိဋ္ဌိ ၀ိစိကိစ္ဆာကို အရင်သတ်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်ကြရမှာပါ။ စက်ဝိုင်း အကွက်နံပါတ်(၁)ကိုကြည့်လိုက်တော့ အတိတ်အကြောင်း အခြင်းအရာငါးပါး၊ ဘယ်တုံးက ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ အတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာ။ ခန္ဓာကို ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်ထောင်တာမဟုတ်၊ ဟောဒီအတိတ်အကြောင်းတရားငါးပါးဆိုတဲ့ ဓမ္မက တည်ထောင်တာလို့ မှတ်ရမယ်။ ဘယ်တုံးကဓမ္မလဲဆိုရင် အတိတ်ကဓမ္မ။ […]
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟာ ဘာကြောင့် ဘုရားအဖြစ် ရောက်တော်မူခဲ့တာလဲဆိုရင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်သွားလို့။ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကျင့်တဲ့လမ်းစဉ်အရ သူလဲ သောတာပန်က စ ခဲ့တာဖြစ်လို့ မည်သူမဆို သောတာပန်ဖြစ်ချင်ရင် ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရလိမ့်မယ်။ ဆိုင်ရာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် မပြတ်ရင် ဖြစ်ကိုမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကိုလဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ခန္ဓာကြီးပဲလုိ့ မှတ်ထားလိုက်ပါ။ သံသရာ ဘ၀စက်လည်နေတဲ့ ဒီခန္ဓာကြီးက ယခုဘ၀ပြီးရင် နောက်ဘ၀သွားရမယ်။ နောက်ဘ၀ပြီးရင် နောက်ထပ် အနာဂတ်ဘ၀ သွားရမယ်။ အနာဂတ်ဘ၀ကနေပြီး ပြန်လှည့်မယ်။ ဒါဖြင့် ဒီဘ၀စုတိနဲ့ ဟိုဘ၀ပဋိသန္ဓေဆက်စပ်နေတာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပဲ။ တစ်နည်းအားဖြင့် ကံနဲ့ အကျိုးပေး ဆက်နေတာ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်လို့မှတ်လိုက်။ ဒီလိုမှတ်ထားတော့ ကံနဲ့ အကျိုးပေးပြတ်သွားလို့ရှိရင်လဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်။ စုတိ ပဋိသန္ဓေပြတ်သွားလို့ရှိရင်လဲ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တယ်။ ဒါတင်မကဘူး ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရင် နိဗ္ဗာန်ပဲ၊ နိဗ္ဗာန်လိုချင်ရင် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ရမယ်၊ ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မပြတ်ရင် နိဗ္ဗာန်မရဘူး၊ ပြတ်မှသာလျှင် နိဗ္ဗာန်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါဖြင့် ခန္ဓာ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပြတ်ဖို့အရေးသည် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အရေးပဲ။ […]
ဝေဒနာပေါ်တိုင်း သတိထား ပညာနဲ့ ကြည့်ဖို့ နည်းစနစ်လေးတွေ မနေ့က ရှင်းလင်းပေးခဲ့တယ်။ သတိရဲ့ အလုပ် ပညာရဲ့အလုပ်လေးတွေ အနည်းငယ် ခွဲခြားသိဖို့ ဒီနေ့ ဆက်လက်ပြောပြမယ်။ ဝေဒနာပေါ်တိုင်း သိရုံသာ သိနေတာကတော့ သတိထားနေတာပဲ။ သတိထားရုံနဲ့တော့ ဒိဋ္ဌိပဲ ကွာမယ်။ ပညာပါမှ မဂ်ဝင်မယ်။ ပျင်းတယ်၊ ဒေါမနဿဝေဒနာ၊ ပျော်စရာတွေ့လို့ ပျော်လာတော့ ပျင်းလုံးလေး ပျောက်သွားတယ်။ ပျင်းလုံးလေးက ဖြစ်ပြီး ပျက်သွားတယ်။ အနိစ္စရောက်သွားတာပဲ။ ပျော်စရာလေးကလဲ သောမနဿဝေဒနာ။ သူလဲ မပျော်မပျင်းဝေဒနာ၊ ဥပေက္ခာဝေဒနာပေါ်လာတော့ ပျောက်သွားတယ်။ ပညာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တော့ ပျော်တာ ပျင်းတာ အလတ်စားဝေဒနာတွေဟာ ဖြစ်ပြီး ပျက်တာပဲ၊ တစ်ဝေဒနာချုပ်ပြီးမှ တစ်ဝေဒနာဖြစ်ပါလား လို့သိသိလာတယ်။ ဒါဆို ၀ိပဿနာဉာဏ်ဆိုက်ပြီ။ သတိရှိနေရုံနဲ့ ၀ိပဿနာမဆိုက်သေးဘူး။ ပညာပါမှ ၀ိပဿနာဆိုက်တာ။ ဝေဒနာလှည့်နေတယ်ဆိုသော်လဲ တစ်ခုချုပ်ပြီးမှ တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ တစ်ခုသောတရားရဲ့ ဖြစ်ပျက်ကို […]
သတိ ပညာနဲ့ နေကြ
ဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးက ရဟန်းတော်များကို ‘သတော ဘိက္ခဝေ ဘိက္ခု ၀ိဟရေယျ သမ္ပဇာနကာရီ၊ အယံ ဝေါ အမှာကံ အနုသာသနီ´ လို့ အကြိမ်ကြိမ် ဆုံးမတော်မူလေ့ရှိတယ်။ အဓိပ္ပါယ်က ဘာလဲဆိုတော့ `သတိ ပညာနဲ့ နေကြ´ တဲ့။ ကိုယ့်ခန္ဓာ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ ခန္ဓာက ပြောတိုင်းပြောတိုင်း သတိထားရတယ်။ ပညာက နောက်ကနေပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးရတယ်။ ဒါဖြင့် သတိထား ပညာနဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ သတိမထားရင် ကိုယ့်ခန္ဓာ ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ မသိဘူး။ သတိထားလိုက်တော့ အခု စိတ်ကတစ်မျိုး၊ တော်ကြာ စိတ်က တစ်မျိုး၊ စိတ်တွေ တစ်စိတ်ချုပ်ပြီးမှ တစ်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတာ သိလာတယ်။ ပညာနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ ပထမစိတ်လဲ မခိုင်မြဲ၊ ဒုတိယစိတ်လဲ မခိုင်မြဲဆိုတာ သိလာတယ်။ ကိုယ့်စိတ်လေးတွေ ပျက်သွားတာ ကိုယ်မြင်နေရတယ်။ ဒါဘာလဲဆိုရင် ကိုယ့်အသေကိုယ် မြင်နေတာ။ သတိမထားလို့ရှိရင် […]
ကျေးဇူးတော်ရှင် အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ သြ၀ါဒများ * ငါသည် မုချသေရမည်၊ အချိန်ပိုင်းသာလိုတော့သည်။ * အသေမဦးမီ၊ ဥာဏ်ဦးစီးပြီး ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်ပါ။ * ရခဲလှတဲ့ လူ့ဘ၀ကို အလွဲသုံးစားအချိန်တွေမဖြုန်းပါနဲ့။ * ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မွေးကတည်းက အသေဘက်ကို ပြေးနေတယ်။ * မနေ့ကထက်ကနေ့ သေဖို့ တစ်ရက်နီးသွားပြီ။ * အပြေးမရပ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်၊ သုဿာန်မရောက်ခင် မဂ္ဂင်အလုပ် အမြန်လုပ်ပါ။ * ခန္ဓာ၏၀တ္တရားက အသေရှာတာ၊ ဥာဏ်၏၀တ္တရားက အသေရှောင်တာ။ * ကိစ္စဟူသရွေ့၊ မဂ်တား-ဖိုလ်တားလို့ မှတ်ပါ။ * တဏှာလောဘခိုင်းတာလုပ်နေလျှင် သေတဲ့အခါ အပါယ်ရောက်မယ်။ * တရားနာနေတဲ့အချိန်ဟာ၊ မတရားအလုပ် မလုပ်တဲ့အချိန်ပဲ။ * နိဗ္ဗာန်သည် ကံ၏အကျိုးမဟုတ်၊ ဥာဏ်၏အကျိုးသာဖြစ်တယ်။ * ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါးရွေးမနေနဲ့၊ သူတော်ကောင်းအလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဟာ မင်္ဂလာအချိန်လို့မှတ်ပါ။ * သာသနာနဲ့ […]
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လမ်းညွှန် (၂) – သစ္စာလေးပါး သဘောသွား
ပြုပြင်လို့ ပေါ်လာရတာက သင်္ခါရ။ ပေါ်လာသမျှသော သင်္ခါရတို့ရဲ့ သွားရာလမ်းက အနိစ္စ။ ဒါကြောင့် ပေါ်လာသမျှတရားတို့ကို ဉာဏ်စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ပေါ်လာတာကို သိတော့ သင်္ခါရကိုသိတာ၊ သင်္ခါရဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုသိတာဖြစ်လို့ အဖြစ်ကိုသိတာဟာ သင်္ခါရပဲ။ ပျက်သွားတာက မမြဲလို့ ပျက်သွားတာဖြစ်လို့ အနိစ္စ။ သြော်- မိမိခန္ဓာမှာရှိတဲ့ ဓမ္မမှန်သမျှ သင်္ခါရနဲ့ အနိစ္စပဲ၊ ဖြစ်တာနဲ့ ပျက်တာပဲရှိတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ဉာဏ်နဲ့ မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်တိုင်သိလာတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ၀ိပဿနာဖြစ်လာတယ်။ သင်္ခါရနဲ့ အနိစ္စ၊ ဖြစ်တာနဲ့ ပျက်တာပဲလို့ သိလိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်တာဟာလဲ ဒုက္ခ၊ ပျက်တာဟာလဲ ဒုက္ခ။ သင်္ခါရတရားတွေဟာ ဖြစ်တာနဲ့ ပျက်တာတွဲနေတဲ့အတွက် ဒုက္ခဆိုတာ မှန်နေပါလားလို့ ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ရင် ဒုက္ခသစ္စာကို မြင်လိုက်တာပဲ။ ဒါကြောင့် ဒုက္ခသစ္စာရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကို မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ လင်္ကာလေးနဲ့ မှတ်လိုက်။ ဖြစ်ပျက်သမျှ၊ သင်္ခါရ၊ ဒုက္ခသစ္စာမှတ်။ […]
ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် လမ်းညွှန် (၂)- လမ်းဆုံး
အနိစ္စာဝတသင်္ခါရာ ဆိုတဲ့ ဂါထာလေးကို တော်တော်များများ ရထားကြမှာပါ။ မရသေးသော်လဲ စိမ်းတော့မစိမ်းပါဘူး။ မကြာခဏဆိုသလို ကြားနေရတဲ့ ဂါထာလေးပဲ။ ဒီနေ့ ဒီဂါထာလေးနဲ့ သင်္ခါရလမ်းဆုံး၊ ၀ိပဿနာလမ်းဆုံးရောက်ပုံကို ရှင်းပြမယ်။ သင်္ခါရတရာတွေဟာ ပြုပြင်လို့ပေါ်လာတာ၊ အကြောင်းကြောင့် ပေါ်လာတဲ့ အကျိုးတရားတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ မနေ့က ပြောခဲ့တယ်။ ဒီလို ပေါ်လာတဲ့ သင်္ခါရတရားတွေသည် ဘယ်မှာလမ်းဆုံးလဲဆိုရင် အနိစ္စမှာလမ်းဆုံးတယ်။ ရုပ်ပေါ်ပေါ် နာမ်ပေါ်ပေါ် ပေါ်လာတာက သင်္ခါရ၊ ပျက်သွားတာက အနိစ္စ။ ဉာဏ်နဲ့ ကြည့်လိုက်တော့ သင်္ခါရနဲ့ အနိစ္စပဲရှိတယ်။ ပေါ်ဆဲ သင်္ခါရ၊ ပျက်သွားရင် အနိစ္စ။ ပူတဲ့ရုပ်လေး ပေါ်လာတယ်၊ သင်္ခါရ၊ အေးတဲ့ ရုပ်လေးပေါ်လာတော့ ပူတဲ့ရုပ်လေးက ပျက်သွားတယ်၊ အနိစ္စ။ ပူတဲ့ရုပ်လေးပျက်သွားတော့ အေးတဲ့ရုပ်လေးက အစားထိုးပေါ်လာတာ၊ သင်္ခါရ။ အနိစ္စကို သင်္ခါရနဲ့ အစားထိုးနေတာပဲ။ ဘယ်ရုပ်ပေါ်လာလာ ပေါ်လာတာ သင်္ခါရ။ […]